कोरोना लाग्छ भन्दै भाडामा बस्‍ने नर्सलाई घरभेटीले घोक्राउँदै निकाले ! दाङ बाट यस्तो भिडियो आयो (भिडियो हेर्नुस) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कोरोना लाग्छ भन्दै भाडामा बस्‍ने नर्सलाई घरभेटीले घोक्राउँदै निकाले ! दाङ बाट यस्तो भिडियो आयो (भिडियो हेर्नुस)
बिरामीको उपचारमा खटिएकी नर्सलाई डेराबाट निकाल्ने घरभेटी प क्रा उ परेका छन् । नर्सलाई घरबाट निकालेको आरोपमा एक जना घरधनी प क्रा उ परेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । प क्रा उ पर्नेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–२ का वडासचिव नारायण आचार्य रहेका छन् ।
कोरोना भाइरसबाट विश्व प्रख्यात वैज्ञानिकको निधन
एजेन्सी- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रिकाकी वैज्ञानिक गीता रामजीको निधन भएको छ । उनको मंगलबार कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
प्राध्यापक रामजी हालै बेलायतबाट घर फर्केकी थिइन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि क्वाजुलु–नाटाल प्रान्तस्थित अस्पतालमा उनी भर्ना भएकी थिइन् । उपचारका क्रममा उनको मंगलबार निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनले दक्षिण अफ्रिकामा एचआईभी संक्रमण रोक्ने उपायको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएकी थिइन् ।
साथै उनले क्षयरोग (टीबी) रोकथामका लागि पनि काम गरेकी थिइन् । दक्षिण अफ्रीका रहँदै आएकी भारतीय मूलकी उनको मृ’त्यू कोरोनाभाइरसकै कारण भएको अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउन्सिलकी अध्यक्षले दाबी गरेकी छिन् । तर उनको मेडिकल रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट ५ जनाको निधन भएको छ । अफ्रिकाको क्वाजुलु नतालमा बस्दै आएकी ६४ वर्षीया गीता साउथ अफ्रिकन मेडिकल रिसर्च काउन्सिलमा एचआईभी संक्रमण रोक्ने विषयमा अनुसन्धानरत थिइन् । उनलाई सन् २०१८ मा युरोपियन डेभलपमेन्ट क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरसिप्सका तर्फबाट आउटस्ट्यटण्डिङ फिमेल साइन्टिस्टको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
बिजुलीकाे महशुल आधा सस्तो हुँदैछ : कुलमान घिसिङ (भिडियो सहित)
शरिरभरि पूर्व राजाको ट्याटु खाेपेका युवा भन्छन् राजतन्त्र १००% आउँछ !